WARBIXIN: Iska ilow Barca,PSG & City Kooxda ilaa Haatan Ugu Fiican Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday & Xog Muujinaysa Waxa Ay Uga Fiicantahay – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Iska ilow Barca,PSG & City Kooxda ilaa Haatan Ugu Fiican Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday & Xog Muujinaysa Waxa Ay Uga Fiicantahay
WARBIXIN: Iska ilow Barca,PSG & City Kooxda ilaa Haatan Ugu Fiican Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday & Xog Muujinaysa Waxa Ay Uga Fiicantahay
Xilli kooxaha Barcelona, Manchester City ama PSG ay soo jiiteen indhaha taageerayaasha marka laga hadlayo horyaaladooda hadana waxa jirta koox cel-celis ahaan ka guulo badan kooxaha Barcelona, Manchester City ama PSG.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka Czech Republic ee Viktoria Plzen ayaa haysata cel-celis ahaan rikoorka ugu guulaha badan horyaalada yurub.
Kooxda Barcelona ayaa haatan horyaalka La Liga ku hogaaminaysa 9 dhibcood iyada oo ka dambaysa kooxda Atletico Madrid halka kooxaha PSG iyo Man city ay 15 dhibcood ku hayaan horyaaladooda.
Si kasta ha ahaatee kooxda Viktoria Plzen ayaa badisya 15 ka mid ah 16-kii kulan ee ay ilaa haatay ciyaartay horyaalka Czech.
Kooxda uu hogaamiyo tababare Pavel Vrba ayaan wali wax guuldaro ah la kulmin waxana ay kaliya bar-baro galeen hal kulan oo kaliya iyaga oo cel-celis ahaan 2.9 dhibic qaatay kualn kasta.
Waxa ay kaliya bar-baro galeen kulankii ugu dambeeyay oo ay bar-baro 0/0 ah la galeen kooxda Teplice.
Waxa ay la safanayaan kooxaha city,Barcelona iyo Porto oo ah kooxaha aan ilaa haatan guuldaro la kulmin horyaalkooda tartamada yurub.
kooxda reer Czech ayaa u soo baxay Europe league wareegiisa 32-ka iyaga oo kaalinta 1-aad kaga soo baxay Group-kood waxana ay haatan cel-celis ahaan ka guulo badan yihiin kana dhibco badan yihiin kooxaha Barcelona,PSG, Napoli Iyo Bayern Munich.
Kooxda kaliya ee haatan la bar-barayn karta dhibcaha ay kulan kasta helaan ayaa ah kooxda Man city oo cel-celis ahaan kulan kasta heshay 2.9 dhibic.
City ayaa ilaa haatan ciyaartay 22 kulan oo horyaalka ah waxana ay cel-celis ahaan guul gaartay 91% waxana ay bar-baro galeen 9% waxana ay heleen 62 dhibcood iyaga oo loogu tala galay 66 dhibcood.
Kooxda Barcelona ayaan dhankeeda wali wax guuldaro ah dha-dhamin iyada oo cel-celis ahaan guul gaartay 83& kulamada ay ciyaartay iyada oo cel-celis ahaan heshay dhibco dhan 2.7 dhibic kulankiiba.
Dhanka kale kooxaha PSG iyo Porto ayaa la mid ah kooxda Barcelona halka guulaha iyo dhibcaha ay heshay cel-celis ahaanta.